तपाईँको टिभी, फ्रिज बिग्रियो? प्लम्बीङ र बिजुली जोड्नुपर्‍यो? लिनुहोस् सजिलो मर्मत सेवा
सहरको कोलाहाल त्यसमा ट्राफिक जाम घरमा टिभी होसा वा फ्रिज बिग्रिएमा वा त्यस्तै अन्य गाह्रौ घरायसी सामग्री बिग्रिएमा मर्मत केन्द्रसम्म लैजाने झन्झट हुन्छ। तर अब यो झन्झट नहुने भएको छ। उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपु र भक्तपुरका जुनसुकै ठाउँमा घरमै पुगेर सेवा दिनेगरी यस्तै कम्पनी खुलेको छ त्यो हो- सजिलो मर्मत सेवा।
असारदेखि सञ्चालनमा आएको सस्तो मर्मत सेवाले यस्तै सेवा दिन्छ जसलाई घरबाहिर लिएर जान गाह्रो हुन्छ। नेपालमा पहिलोपटक सजिलो व्यापारिक संस्था र घरघरमा सेवा दिनेगरी स्थापना गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। प्लम्बिङ, विद्युत, कम्प्युटर हार्डवेयर र नेटवर्किङ तथा घरायसी सामाग्रीको मर्मत तथा जडान सेवा प्रदान गरिने सेवाका विवेक महर्जनले जानकारी दिए।
अहिले सुरूवाती चरणमा रहेको सेवाले आगामी दिनमा उपभोक्ताहरुलाई अझै सहज सेवा दिनको लागि सेवाहरु थप्दै सबै खाले मर्मत सम्बन्धी सेवा दिने महर्जनले जानकारी दिए।
‘जहाँ समस्या त्यहाँ सजिलो’ भन्ने नारासहित आएको उक्त सेवाले भरपर्दो र विश्वासिलो सेवालाई अझै परिष्कृत गर्दै लिने लक्ष्य लिएको छ।
कसैलाई सजिलो सेवाबाट सेवा लिन मन लागेमा वा घरमा कुनै मर्मत तथा जडानसम्बन्धी आवश्यकता परेमा ९८४१-५०३२०४ नम्बरमा फोन गरेपछि प्राविधिकहरुको उपलब्धता अनुसार तत्काल उक्त ठाउँमा सेवा प्रवाह गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
अहिले १ सय जना प्राविधिकहरु खटाएका सेवाले आवश्यकता अनुसार वार्षिक करार सुविधा पनि दिने महर्जनले जानकारी दिए।
सुरुवातमा सजिलोका एक मुख्य संस्थापक, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबिए गरेका सुजित रेग्मीको अगुवाईमा स्थापना भएको सजिलो सेवाले भविष्यमा वेव र मोबाइल एप्लिकेशनद्वारा ग्राहक र टेक्निसियनलाई अझ नजिक ल्याई, सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १३, २०७४, ०६:५४:४६